एसियामा चीनको बढ्दो प्रभुत्व कम गर्न अमेरिका सफल होला?
कात्तिक २८, २०७४| प्रकाशित १२:४४
एसिया भ्रमणमा निस्किएका अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सुरुमा उत्तर कोरियाका नेता किम जोन उनको खिल्ली उडाए। केही घन्टामै आफ्नो अभिव्यक्ति सुधार गर्दै उनले किम र आफू निकट भविष्यमै राम्रो साथी बन्न सक्ने बताए। एसियाका पाँच मुलुकको भ्रमणमा निस्किएका ट्रम्प विरोधाभासपूर्ण अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्। राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गरेर विदेश भ्रमणमा रहेका आफ्नो राष्ट्रपतिको फितलो प्रस्तुतिले अमेरिकी कुटनीतिक वृत्तमा आलोचना भइरहेको छ।
उनीहरुले ट्रम्पको भ्रमणले अमेरिकालाई कुनै फाइदा नपुग्ने भन्दै आलोचना सुरु गरेका छन्। राजकीय सम्मानमा मख्ख परेर ट्रम्पले अमेरिकी चासोका मुद्दा एसिया भ्रमणमा दह्रो रुपमा उठान गर्न भुलेको आलोचकहरुको प्रतिक्रिया छ।
‘विदेशमा राजकीय सम्मान पाएपछि ट्रम्पले मानवअधिकार र प्रजातन्त्रको मुद्दा बिर्सिएका छन्,’ एक कूटनीतिज्ञले भने– ‘एसिया भ्रमणमा ट्रम्प भद्र पाहुना बाहेक केही हुन सकेनन्।’
भियतनाम पुगेका ट्रम्पले वाक् स्वतन्त्रा कुण्ठित भएकोमा आवाज उठाएनन्। मानवअधिकार उल्लंघनको घटनामा पनि चुइँक्क बोलेनन्।
कूटनीतिक भ्रमणमा राष्ट्रप्रमुखले आफूले प्रयोग गर्ने भाषाको ख्याल राख्नुपर्छ। ट्रम्पले भने सामान्य मर्यादाको समेत ख्याल नराखेर उत्तर कोरियाली नेताको खिल्ली उडाएको भन्दै उनको आलोचना भइरहेको छ। विगतमा जसरी ‘पुड्का र भद्दा’ भनेर उत्तर कोरियाली नेताको मजाक उडाउँथे, एसिया भ्रमणमा पनि उसै गरि किम जोङ उनको मजाक उडाए।
एसियाली क्षेत्रका नेताहरु उत्तर कोरियाली नेताप्रति त्यति आक्रोशित छैनन्, जति ट्रम्प देखिन्छन्। एसियाली राष्ट्रका नेताहरु शान्तिपूर्ण ढंगबाट समस्या समाधानको पक्षमा रहेको बेला ट्रम्पको आक्रोशपूर्ण अभिव्यक्ति जायज थिएन्। यसले उत्तर कोरियालाई उत्तेजित मात्र तुल्याउँछ। यो ट्रम्पले अझै बुझ्न सकेका छैनन्।
भ्रमणमा ट्रम्प जति फितलो प्रस्तुत भए, अन्य देशका राष्ट्रप्रमुखले पनि उनलाई उत्तिकै हल्का रुपमा लिएका छन्। जापानी प्रधानमन्त्री सिनजो आवेले ट्रम्पलाई गल्फका कुशल खेलाडीका रुपमा मात्रै व्याख्या गरे। (ट्रम्प गल्फका कुशल खेलाडी हुन्।)
दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति मुनले पनि ट्रम्पलाई उडाउन भ्याए। ‘महान् भइसकेको अमेरिकालाई महान् बनाउने उद्देश्य लिएर आएका नेता हुन् ट्रम्प,’ उनले भने।
जापानी प्रधानमन्त्री र कोरियाली राष्ट्रपतिको शब्द जति नै मीठो भए पनि अर्थ निकै गहिरो थियो। ‘ट्रम्पको व्यक्तित्वको यो भन्दा अर्को मजाक हुनै सक्दैन,’ बिबिसीसँगको कुराकानीमा एक अमेरिकी कुटनीतिज्ञले बताए।
चीनमा ट्रम्पको एकतर्फी प्रस्तुति
पहिलो पल्ट बेइजिङ टेकेका ट्रम्प समकक्षीको भव्य स्वागतले मन्त्रमुग्ध थिए। चीन पुगेर सी जिङपिङको प्रशंसामा धेरै शब्द खर्चिए। ट्रम्पले भने, ‘सी विशेष छन्, जसले आफ्नो नागरिकलाई सधैँ गर्व अनुभूति गराउँछन्।’
ट्रम्पले प्रशंसाको यी शब्द खर्चिदा हेक्का राखेनन् कि समकक्षी सीले उनलाई यत्तिकै ओजिलो शब्दले अभिनन्दन गर्नेछन्। एसियाका अन्य मुलुकले ट्रम्पलाई विश्वका नेता माने पनि बेइजिङले त्यो पगरी ट्रम्पलाई कदापि दिनेछैन। यो सामान्य कुरा पनि ट्रम्पले हेक्का राख्न सकेनन्। उनी समकक्षीको प्रशंसायोग्य शब्दको व्यग्र प्रतिक्षामा देखिन्थे।
एपेक सम्मेलनमा अनावश्यक आक्रोश
एपेक सम्मेलनमा ट्रम्पले चीनप्रति अनावश्यक आक्रोश व्यक्त गरे। एसिया भ्रमणका बेला समेत ‘अमेरिका फष्ट’ को नीतिलाई आफूले प्राथामिकतामा राखेको भन्नका लागि उनले चीनप्रति आक्रोश व्यक्त गरेका हुन्।
‘अनुचित व्यापारको अभ्यास गरेर फाइदा लिने पक्षमा अमेरिका छैन,’ चीनले एसिया क्षेत्रमा बढाउँदै गएको सहकार्यलाई लक्षित गर्दै उनले एपेक सम्मेलनमा आक्रोश पोखे।
ट्रम्प चीनप्रति आक्रोशित भएपनि त्यही मञ्चमा भाषण गरेका सी संयमित देखिए। एसियाली क्षेत्रमा प्रविधिको आविष्कार, जलवायु परिवर्तनको समस्या समाधान र समग्र विकासमा चीन अमेरिकासँग सहकार्य गरेर अघि बढ्न तयार रहेको भाषण सीले गर्दा मञ्चमा आसीन व्यक्तिहरुको तालीको गडगडाहटले पूरै माहौल गुञ्जायमान भएको थियो।
एपेक सम्मेलनमा ट्रम्पको आक्रोशले चीन र अमेरिकाबीचको द्वन्द्व सार्वजनिक रुपमै छताछुल्ल भयो। ‘साउथ चाइना सी’ को विषयमा दुई देशबीच विवाद छ। सतहमा यसलाई लिएर चर्को विवाद भए पनि सुल्झाउन अमेरिका र चीनबीच नेपथ्यमा नरम रुपले वार्ता भइरहेको छ।
‘साउथ चाइना सी’ मा कसको सैन्य शक्ति कति? भन्ने प्रश्नले बेला बेला दुबै मुलुकबीच तनावको स्थिति निमार्ण भएको छ। यो अवस्थामा ट्रम्प प्रशासनले आफ्नो रणनीति बदल्न सकेको छैन। यसले उनीप्रति प्रश्न तेर्सिएको छ। ‘के ट्रम्प अपरिपक्व नीति अवलम्बन गरेर अमेरिकाको परम्परागत प्रभुत्व सखाप पार्न खोज्दै छन्। चीनमा सीको पुनरोदयपछि अमेरिकाको घट्न सक्ने प्रभुत्वबारे के ट्रम्प सचेत छन्?, यस्ता प्रश्नले ट्रम्पलाई कमजो बनाउँदै लगिरहेको छ।
कूटनीतिक जानकार भन्छन्– अहिलेको प्रतिस्पर्धा दुई नीतिमा आधारित छ, ‘अमेरिका पहिलो, वा बलियो चीन।' चीनले एसियाली मुलुकसँग सहकार्य अघि बढाउँदै लगेको अवस्थामा एसियाली राष्ट्रको भ्रमणमा ‘अमेरिका पहिलो’ केन्द्रित ट्रम्प नीति फितलो देखिएको छ। विश्वमै आफ्नो प्रभुत्व कायम राख्न ट्रम्प थप सचेत नभए विश्व राजनीति मञ्चमा उक्लिँदै गएको चीनको प्रभुत्व कम गर्न अमेरिका असफल हुने स्पष्ट छ।
एजेन्सीको सहयोगमा शिशिर ढकालले गरेको अनुवाद